घर फुटबल EXTRAS फुटबल प्रबन्धकहरू कार्लो एसेस्लोटी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल जीनियसको पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ, जो उपनाम द्वारा प्रख्यात छ; 'Carletto'।
हाम्रो कार्लो एन्सेलोटी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ। विश्लेषण प्रसिद्धी, पारिवारिक जीवन र उहाँ बारे मा थोरै-ज्ञात तथ्या before्क भन्दा पहिले उनको जीवन कहानी शामिल छ।
हो, सबैलाई आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमताहरूको बारेमा थाहा छ तर केहीले हाम्रो कार्लो एन्सेलोटीको बायोलाई विचार गर्छन् जुन अत्यन्त चाखलाग्दो छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
एन्टोनियो कन्ट्री बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
Carlo Ancelotti बचपन कहानी - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि:
कार्लो एन्सेलोटीको जन्म जून १ 10। June को १० औं दिनमा श्री र श्रीमती जिउसेप एन्सेलोट्टीमा भयो जो चिजका किसानहरू थिए। उहाँ रेजीजियोमा हुर्कनुभयो जुन उत्तरी इटालीको मध्य भागमा रहेको ग्रामीण पनीर फार्मिंग शहर हो।
शहर भोक छous न केवल यसको पिर्मेनी पनीर को लागी तर कार्लो एसेस्लोटी को नाम मा विश्व स्तरीय फुटबलर र प्रबंधक को एक निश्चित नजरबंदी को लागि।
उहाँ सधै, उनीहरूको हर्षित व्यक्तित्वलाई उनीहरूको बचपनको समयबाटै बिताउनुहुन्थ्यो। कार्लो एस्लोटीटी हुँदा उनको बुबाको पछि बढ्दै गयो। तिनको पिता गियपपेप थिए जसलाई सँगसँगै र विशेष गरी पृथ्वीमा सजिलो सजिलो थियो। उनले कार्लोलाई एक ईमानदार र परम्परागत इटालियन उत्थान प्रदान गरे।
तिनका प्रारम्भिक बचपनका वर्षहरू प्रायः आफ्नो बुबा, आमा र भाइसित खेतीमा काम गरिरहेका थिए। कार्लो ठूलो भयो आफैले आमाबाबु र शिक्षकहरूबाट कडा परिश्रम र अनुशासनमा आशिष् दिनुहुन्छ।
बढ्दै गर्दा ऊ एउटा कुराले विचलित भयो। तथ्य यो छ कि 'किसान परिवारलाई गरीबीबाट निकाल्न पर्याप्त थिएन।' यसले भविष्यमा उनी के हुन्छ निर्णय गर्ने उसको खोजमा एक महत्वपूर्ण मोड ग .्यो।
Carlo Ancelotti अनटोल्ड जीवनी तथ्य - एक फुटबलर हुन निर्णय:
प्रारम्भिक उमेरबाट, उनले आफ्नो बुबा र आमालाई हेरचाह गरी हेरेपछि केही जीवन बनाउनको लागि महत्वाकांक्षालाई विकास गरे र उनीहरूको कृषि पनी खेतले सानो इनामको लागि काम गरिरहेको थियो। यसैले उनले फुटबलमा क्यारियर सुरु गर्ने निर्णय गरे।
एक साक्षात्कारमा कार्लो एन्स्लोट्टीले भने। "फुटबल बस एक नौकरी छैन। म एक खेतीमा हुर्के, फुटबल एक राम्रो जीवन हो। " यो केहि कुरा हुन को लागी एन्सेन्टिटी को ड्राइव थियो जसलाई उसलाई खेती देखि Reggiolo युवा टीम सम्म लिया, जहां उनले देखेको थियो पर्मा र माथि उठाइयो।
त्यसैले, एक देश केटाको सपना जुन फुटबलको साथ आकाश छुनु भएको थियो।
मिस केन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
कार्लो एन्सलोटी अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू - फरक जीवनलाई अनुकूलन गर्दै:
यो जङ्गल कार्लो चुप कृषि ग्रामीण शहर उनको बचपन बाट फुटबल को लागी जोरदार दृढ शहर को लागि एक झटका थियो को लागि एक झटका थियो। उनले मन पराए जस्तै भविष्यमा यति धेरै पटक गर्थे। कार्लो आफुलाई एक जवान केटाको रूपमा देखा पर्यो जुन फुटबल र सास फेर्न सक्षम थियो। उहाँ एक राम्रो र धैर्य सुन्नु र शिक्षक हुनुहुन्थ्यो जसले आफ्नो समय वरिष्ठ खेलाडीहरू हेर्न र सिक्न थाले।
Ancelotti एक इटालियन प्रतिमा डरलाग्दा 15 वर्ष पुरानो हुन सक्छ, स्कूडिटोटो र चार कोपा इटाली रोम, त्यो मिलान टीमको हिस्सा बन्न, एरिगो साची द्वारा प्रबंधित - अन्तिम टोली लगातार दुई युरोपेली कप जित्न।
युवा कार्लो एक दिन पछि एसी मिलानमा ठूलो स्टार थिए। परमा, एएस रोमा र एसी मिलानका लागि एक मिडफिल्डर, उनले रोमालाई १ 1983 1986 मा सेरी ए खिताब र चार इटाली कप जित्न सहयोग गरे १ 1989 in1990 मा एसी मिलानमा प्रवेश गर्न अघि उनले दुई अन्य लिग च्याम्पियनशिप, साथै पछाडि-पछाडि युरोपियन कप जितेका थिए। १ XNUMX XNUMX and र १ XNUMX XNUMX ० मा।
फ्रैंक रिब्री बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
चौथो, Ancelotti कोचिंग शुरू गर्दछ। उनी आफ्नो रेग्जियाना पक्षको साथ सेरी एमा पदोन्नति लिन्छन्, जुभेन्टस र एसी मिलानमा एक पाइला बढ्छन्, जहाँबाट उनी अल खेलाफीको पीएसजीमा प्रवेश गर्नु अघि अब्रामोविचको चेल्सी सर्छन्। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
कार्लो एन्सेलोटी प्रेम जीवन:
के तपाईं रियल म्याड्रिड कोच कार्लो आइसोलोटीको प्रेमिका भेट्नुभयो? सम्भव छैन, होइन Luisa, उनको पूर्व पत्नी र समुद्री समुद्री कर्तू न कि त्यो उनको पूर्व प्रेमिका हो।
मारियो म्यान्डजुकिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एन्स्लोटी वर्तमान मा मैरिआन बर्रेन मेकले को रूप मा पहिचान को एक चौंकाने वाला गोरा को डेटिंग गर्दछ। तल उनको हट क्यानाडाली महिलाको सुन्दर चित्र हो।
उनी कार्लोलाई धेरै माया गर्छिन् किनभने उनीसँग रमाइलो छ। तल उनीहरूको फोटो ओक्टोबरफेस्टमा उपस्थित छ (Oktoberfest संसारको सबैभन्दा ठूलो फोक्सफेस्ट हो। प्रत्येक वर्ष म्यूनिख, बावरिया, जर्मनीमा आयोजित)।
मारियानको जन्म क्यानाडाको भ्यानकुभरमा मारिया कन्सेपसिएन गुटियरेज र एन्टोनियो ब्यारेनामा भएको थियो। उनी धेरै राम्ररी शिक्षित छिन्।
उनले थन्डरबर्ड स्कूल अफ ग्लोबल मार्केटि fromबाट मार्केटिंगमा एमबीए गरेकी छिन् अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय र एक पीएचडी, क्यास व्यवसायबाट वित्तमा। उनीले व्यवसाय प्रशासनमा बीबीए पनि राख्छिन् सिमोन फ्रेजर विश्वविद्यालय।
तिनी एक पटक एक सल्लाहकार थिए बार्कलेज लन्डनमा बैंक। त्यो समयमा, २०११ मा, उनले कार्लो अन्सेलोटीसँग भेट गरे जो चेल्सीसँग काम गरिरहेका थिए। एन्लोत्टी र ब्यारेना म्याक्लेको जुलाई २०१ in मा भ्याकूवरमा विवाह भयो।
Aw! तिनीहरू धेरै खुसी हुन्छन् र हामी जान्दैनौ कि कुन बच्चा त्यो त्यो समयमा पकडिरहेको छ। यो दुवैको लागि उनीहरूको दोस्रो विवाह थियो र मारियनसँग धेरै सुन्दर किशोर बेटी छ, च्लो मैकले।
उनी भन्दा पहिले कार्लोको श्रीमती लुइसासँग दुई दशक भन्दा बढी भइसकेको थियो। तल तिनीहरूको फोटो हेरेर, एउटा कुरा साधारण छ। कार्लो पक्कै सुन्दर महिलाहरु को लागी एक आँखा छ।
लुइसासँग फुटिसके पछि उनले मरिना क्रेतुलाई डेट गरे जो उनी भन्दा १ 13 बर्ष कान्छी छन्। एन्लोलोती र उनको एक्स-पत्नी लुइसा गिबेलिनी दुई छन् बच्चाहरु डेभिड, जो एक रियल मैड्रिड फिटनेस कोच हैं।
जसरी ह्यारी रेडकनाप, स्टीव ब्रुस र Zinedine Zidane आफ्ना छोराहरूलाई फुटबलमा अवसर दिएका छन्, कार्लो एन्सेलोटीले पनि यस्तै गरिदिएको छ। उनले एकपटक आफ्नो अनुभवी छोरा डेभिडलाई बायरन म्युनिक सहयोगी कोचका रूपमा नियुक्त गरे जब उनी अलियान्ज एरेनामा थिए।
कार्लो एसेस्लोटीकी छोरीकी बहिनीकी बहिनीकी छोरीकी छोरी हुन्। तल हेर्ने लक्षण र उनको बुबाको फोटो हो।
क्याटिया उनको पहिलो बच्चा र छोरी हो, जुन 18 को 1984th मा जन्मिएको छ। उनले 2014 मा आफ्नो साथीलाई विवाह गरे, Mino Fulco।
कार्लो एन्सेलोटी व्यक्तिगत जीवन:
कार्लो आफ्नो व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषता छ।
कार्लो एन्सलोटीको क्षमताहरू: उहाँ सज्जन, स्नेह, अनुकूलन, छिटो सिक्न र विचारहरू बदल्न सक्षम हुनुहुन्छ
कार्लो एन्सेलोटीका कमजोरीहरू: उहाँ त्रास, असंगत र अपमानजनक हुन सक्नुहुन्थ्यो।
के कार्लो एसेस्लोटी मनपर्छ: संगीत, पुस्तकहरू, पत्रिकाहरू, लगभग कसैसँग च्याटहरू र कुनै पनि शहर वा शहर वरिपरी छोटो यात्राहरू उहाँले भ्रमण गर्नुहुनेछ।
के कार्लो एसेस्लोटीले नमनपराउने: एक्लै हुनु, सीमित हुनु, दोहोरिने र दिनचर्या।
संक्षेपमा, कार्लो उनको संसारबाट धेरै प्रभावित हुन्छ। उहाँ सामान्यतया यो निरन्तर भावना पाउँनुहुन्छ कि उनी सबै कुरा हेर्न चाहने अनुभव गर्न पर्याप्त समय छैन।
कार्लो एन्सेलोटी धूम्रपान गर्ने आदत:
केहि दुर्लभताको रूपमा आउँछ भन्ने कुरा यो हो कि एक पटक उसले एक खेलाडीको रूपमा आफ्नो जुत्ता टुक्रियो, कार्लोले धूम्रपान गर्न शुरू गर्‍यो जुन आजसम्म उसको जीवन चक्रमा रहन्छ। तपाईं, उहाँ यो कहिलेकाँही दाबी गर्नुहुन्छ।
जब हालसालै सोधिएको थियो, "कार्लेटो" (उहाँलाई उसको परिवारका सदस्यहरूले स्नेहको रूपमा बोलाइएको छ) अटल भएर भनेका छन कि "उसले छोड्ने प्रयास गरिरहेको छ"।
Carlo Ancelotti अनटोल्ड तथ्यहरू - उनको बाँया भौं:
किशोरीको रूपमा भेस्पा दुर्घटना पछि कार्लोको देब्रे भौं स्थायी रूपमा तोडियो। कहिलेकाँही ऊनि दाहिने भौंलाई उद्देश्यका साथ सिमेट्रिकल देखाउन मेच गर्दछ।
कार्लो एन्सेलोटी पारिवारिक जीवन:
पहिले बताए अनुसार कार्लो फुटबल निवेशबाट फर्काउनु अघि गरीब परिवारको पृष्ठभूमिबाट आयो।
चेल्सीसँगको अन्तिम सिजनमा, एन्सेलोटी नियमित on 87 वर्षको बुबालाई भेट्न इटाली जानु पर्थ्यो जो मधुमेह र अन्य समस्याहरूको कमजोर स्वास्थ्यमा थिए।
मुद्दामा उनले भने, "मलाई यस कारणले टोली प्रबन्ध गर्न समस्या छैन। यो गाह्रो छ, भावनात्मक रूपमा, जब यो तपाईंको बुबा हो… तर यो जीवन हो। मैले उहाँसँग नजिक हुन यथासक्दो गर्नुपर्दछ, तर यो जीवन हो। ” उनका बुबा September 29 सेप्टेम्बर २०१० मा died 2010 बर्षको उमेरमा मरे। कार्लो एन्सेलोटीको एक बहिनी एन्जेला एन्सेलोती छ।
Carlo Ancelotti अनटोल्ड जीवनी तथ्य - चैम्पियन्स लीग सफलता कहानी:
कार्लो एन्जिलोटीले5UEFA चैंपियन्स लीगहरू स्वर्ण पदकहरू राख्छन्।
उनको पहिलो दुई जब एसी मिलन खेलाडी थिए, तब टूर्नामेंट जिते पछि फेरि एक्सन्यूक्स र एक्सएनक्सक्स मा फिर्ता आएर युरोपियन कप भनिन्छ।
ब्यवस्थापकको रूपमा एन्सेलोटीले २०० Mila र २०० Mila मा मिलानसँग दुई पटक च्याम्पियन्स लिग जित्यो, र यो बितेको वर्षमा रियल म्याड्रिडसँग फेरि।
१ 1984।4मा (यद्यपि त्यस दिन लाइनअपमा थिएन) एन्सेलोटी र एएस रोमा टूर्नामेन्ट जित्नेभन्दा टाढा पेनल्टी-शुटआउट थिए, तर अन्ततः १-१ अन्तिम स्कोर पछि लिभरपूलमा स्पट किकमा -2-२ ले पराजित भए।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो कार्लो अनसेलोटी बचपन कहानी प्लस अनउठाइएको जीवनी तथ्यांकहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। LifeBogger मा, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि देख्नु भयो जुन यस लेखमा ठिकै लाग्दैन भने, कृपया तपाईको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.
चेल्सी एफसी पूर्व-खेलाडीहरू
जमाल मुसियाला बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
फुट ढलान भ्रमण - तन्जानिया
सबै भन्दा राम्रो प्रबन्धक को एक सबै समय मा यूरो!
परिमार्जित मिति: मे १,, २०१ 5